Izindlu e- La maison village - I-Airbnb
Izindlu e- La maison village
I-ifulethi ephelele ibungazwe ngu-Julie-Vanessa
U-Julie-Vanessa Ungumbungazi ovelele
Uyemukelwa efulethini laseLa maison du village elisenkabeni yedolobhana lase-Anse-Saint-Jean.
Nale Terre Pied-e-inthanethi futhi zikhululekile, ujabulele ukuhlala nomndeni wakho ku Bas-Saguenay nge ekhishini enkulu, egumbini lokuphumula benethuba ukubeka embhedeni owodwa, amakamelo amabili okulala, indlu yangasese nge Igumbi ilondolo kanye kuvulandi nge Ukubuka kwe-Anse-Saint-Jean waterfall.
Efulethini, uzoba nakho konke okudingayo ukuze ujabulele iholide elihle e-Anse-Saint-Jean. Uzothola zonke izinsiza ezisebenzayo zokupheka ukudla kwakho, okomisa izingubo okomisa izingubo zakho zohambo kanye nazo zonke izinto ezincane zansuku zonke: izinto zasekhishini, amathawula, okokulala...
4.86 · 96 okushiwo abanye
Phakathi nebanga lokuhamba, kunefektri kashokoledi yezandla i-Kao chocolat, i-Chasse-Pinte microbrewery ekhiqiza ubhiya omnandi ngempela! Kukhona nesitolo segrosa sase-Amyro, iposi, iCaisse Desjardins.
Ngizotholakala futhi ngifinyeleleke ukuze ngihlangane nawe uma kudingeka.
UJulie-Vanessa Ungumbungazi ovelele
Inombolo yepholisi: 302965